ဘယ်သူတွေဘာတွေလုပ် — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited October 2009 in Other
ဘန်းကျော်ပြင်ပက အကိုတွေလဲ ၀င်ပီးဆွေးနွေးပေးနော်
မော်မော်တွေမင်မင်တွေလဲ ပါတယ်နော် \_:d/ \_:d/
ကျွန်တော်ကတော့ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းလေးဖွင့်ထားပါတယ်။ အင်တာနက်လည်း သုံးလို့ရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ပညာရေးပိုင်းကတော့ အဆက်ပြတ်သွားတာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Self-study ကိုပဲ အားကိုးပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေပါတယ် ....
ဘန်းကျော်မှာ သင်တန်းတွေ တက်ထားတာတော့ စိတ်ပါ၀င်စားရှိရင် အကောင်းဆုံးပဲဗျ။ ကွန်ပျူတာကို အခြေခံကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့အတွက် Hardware Engineering မဟုတ်တောင် စက်နဲ့ လူနဲ့ အင်အားမျှတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုခုမှာ သေသေချာချာ သင်သင့်ပါတယ်။ ကိုPHP crazy တို့ ဆိုင်မှာလည်း အဲဒီလို သင်ပေးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဟီး အသားလွတ်ဖားတာ၊ ခဏခဏ မေးတော့မယ် :P) internet ကနေ ခုလို Forum တွေမှာ ၀င်တတ်၊ ရှာတတ်၊ လေ့လာတတ်အောင် အခြေခံ အင်တာနက် email သုံးတာတတ်ရပါမယ် (chatting က အသင်လွတ် ) တစ်ခုပြီးတစ်ခု အကျိုးပြုသွားတာ တွေ့ရမှာပါ။ ခုတော့ ကိုယ်စပ်စပ်စပ်စပ် သိထားတာတွေနဲ့ ထင်ရာမြင်ရာ လုပ်ကြည့်ပြီး မနိုင်ရင် MZ ၀င်မေးနေပါတယ်။:D
၁၀တန်း ပီးပီးချင်း Office 2007 လေးကိုတက်လိုက်သေးတယ်ဂျဟိိဟိ:D:D
ရှင်းရှင်းပြောတုံးကအဲ့တုံးက ဒီလို Forumတွေမ၀င်ဖြစ်ဖူးခင်ဗျ
ကြားထဲမှာတော့ PC World တို. Computer တို.လို Magazines တွေပဲ Self Studyလုပ်ဖြစ်တယ်
နောက်တော့ IDCS ကိုကျနော်သူငယ်ချင်နဲ.တက်ဖြစ်တယ်
ကျနော်က ကျောင်းတက်ရမှာဆိုတော့ အဲ့ကစာမေးပွဲကိုမဖြေပါဘူး
အခုတော့ ကျနော်လဲ Self-Study ကိုပဲအားကိုးနေပါတယ်
ကျွန်တော် ကတော့ ဟိုစပ်စပ် ဟိုယောင်ယောင်နဲ့ဗျ...လိုင်းတွေလည်း စုံကုန်ပြီ.....တစ်ခုမှလည်း
သေချာသိမလာဘူး(အဟီးကြွားတာဟုတ်ဖူးနော်)....အခုတော့ php လေ့လာနေပါတယ်......
နောက်လူတွေကျွန်တော့်လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး...ကိုယ်၀ါသနာပါတဲ့ လိုင်းကိုပံ သေချာလိုက်စေချင်တယ်....သူများယောင်လို့ကိုယ်လိုက်ယောင်ပြီး သင်တန်းတွေလိုက် မတက်စေ
ကျနော်ပြောတော့ ပြောချင်တယ် ဒါပေမဲ့ သင်တန်းတွေ အများကြီးကိုဆော်သလိုဖြစ်သွားမှာစိုးလို့။ ကောင်းတာပဲပြောမယ်နော်။ A+, Networking, MCP, MCSA, MCSE, Cisco ဆိုရင် Compu Tech က အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး(ကိုယ်တွေ့)၊ programming နဲ့ ပက်သက်ရင် ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံ က MIT (MPEC) ကောင်းတယ်ပြောကြတယ် (သူများပြော)။ Ace လဲကောင်းတယ်ပြောတာပဲ။
ကျွန်တော်အခုတော့ ဘာမှမတက်သေးပဲ(ပိုက်ပိုက်မရှိလို့) အင်တာနက်ဆို်င် တစ်ခုမှာလုပ်နေကြောင်ပါဗျား
သင်တန်းကတော့ အခြေံတို့ ဒီဇိုင်းတို့ဒါပဲပြီးပါသေးတယ် အခုမှ အွန်လိုင်းကနေစာသင်နေပါတယ် (အပြင်ကသင်တန်းတွေမကြိုက်လို့)
ကျွန်တော်ကတော့..ဆယ်တန်းဖြေပြီးပြီးချင်း A+ သင်တန်းတစ်ခုတက်ထားပါတယ်.:)..လောလောဆယ်တော့..self study အနေနဲ့... ebook တွေရှာဖတ်ပြီး..မသိတာရှိရင်..MZ ကိုပဲအားကိုးနေကြောင်းပါ......:77::77::77::77:(၀င်တော့မေးရဲသေးဘူး....ရှာဖတ်တာကိုပြောတာ)....:D:D:D:D
Alexander ၁၀တန်းဖြေပြီးခါစက ( ၁၉၉၈ ) ....
Y.E.S မှာ ၂နှစ်လောက် Speaking တက်တယ် ( ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ) ....
၂၀၀၁-၂၀၀၂ မှာ KMD မှာ IDCS တက်တယ် ... ၀ါသနာလုံး၀မပါတဲ့ Programming မို့လို့ ဘာမှဖြစ်မလာပေမဲ့ ... အပေါင်းအသင်းတွေကြောင့် အခြေခံတော်တော်ရခဲ့တယ် ......
၂၀၀၃-၂၀၀၄မှာ သုခကမ္ဘာ ဆေးရုံမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း Dip. in Global English တက်တယ် ....
၂၀၀၄ မှာ Savoy Hotel မှာအလုပ်လုပ်တယ် ....
၂၀၀၅မှာ Softlink Internet Cafe .....
၂၀၀၆ မှာ Dip. in Network Engineering တက်တယ် ....
၂၀၀၇ မှာ Winner Computer Group မှာအလုပ်၀င်လုပ်တယ် ...
၂၀၀၈ မှာ Joint Contract နဲ့ အခု UNICEF ( မော်ကျွန်း ) ရောက်နေတယ် ....
၂၀၀၉ ကျရင်တော့ FRC ( French Red Cross ) ( မော်ကျွန်း ) ကိုသွားဖို့ နဲ့ MCSA or other Dip./Cert. တစ်ခုခုတက်ဖို့ ကြိုးစားနေပါဧ။်။
ကိုကြီး Alexander ရဲ. Time Line & ဘ၀ဇတ်ခုံအဖုံဖုံပေါ့:D:D
ကျွန်တော်ကတော့ လက်ရှိ MCC မှာ Solution devloper ဆိုတဲ့သင်တန်းတတ်နေတယ်ဗျ။ ဘာတွေသင်လဲဆိုတော့
စသည်များကိုသင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပဲမှတ်ဉာဏ်မကောင်းတာလား။ သူတို့သင်တာပဲမြန်တာလားတော့မသိဘူး။ Microsoft Access တစ်ခုပဲကောင်းကောင်းလိုက်နိုင်တယ်။ :P ဆရာ/ဆရာမတွေကတော့ သဘောကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်အထင်သင်ပြတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်နေတယ်လို့ထင်သလိုပဲ အဲဒါတွေကို ၃လပဲသင်ရမှာတဲ့။ ၁လကျော်သွားပြီ ကိုယ်တိုင် program မရေးတတ်သေးဘူး။ ဘယ် coding ကဘာအလုပ်လုပ်လဲကောင်းကောင်းမသိသေး...
၁၀ တန်းပြီးပြီးချင်း ရွာကိုသွားပါတယ်။ ပြန်လာတော့ Success မှာ သင်တန်းတက်ပါတယ်
အခုထိတက်နေတုန်းပါ( နောက်level တစ်ခုပေါ့ဗျာ...)
ပြီးတော့ MCC မှာ IDCS တက်နေပါတယ် (မတ်မှာဖြေမယ်ပေါ့) အမ်ဇက်က တက်လက်စ ဖြေပြီးအစ်ကို အစ်မတို့ကို အဆိုင်းမန့်လေးအပ်ချင်လို့ပါ..ကူညီပေးကြပါနော်...။ ပညာပူဇော်ခထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ........။
University ကတော့ မတက်တော့ပါဘူ...(ပျင်းလို့) အခုတော့ အိမ်က ပိုက်ဆံတွေ မှိုတက်မှာစိုးလို့ ထိုင်ဖြုန်းပေးနေပါကြောင်း....
ပြီးတော့ MICT က Creative မှာ Web Essential လေးလည်းတက်နေပါကြောင်း.....................
ဆရာ/ဆရာမတွေကတော့ သဘောကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်အထင်သင်ပြတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်နေတယ်လို့ထင်သလိုပဲ အဲဒါတွေကို ၃လပဲသင်ရမှာတဲ့။ ၁လကျော်သွားပြီ ကိုယ်တိုင် program မရေးတတ်သေးဘူး။ ဘယ် coding ကဘာအလုပ်လုပ်လဲကောင်းကောင်းမသိသေး...
ကိုညမီအိမ် အနော်လည်း အမ်စီစီကနော်...... ဘယ်ဆရာမက အပြကောင်းတာလဲ တိုင်ပြောမယ်
အခုတော့ အိမ်က ပိုက်ဆံတွေ မှိုတက်မှာစိုးလို့ ထိုင်ဖြုန်းပေးနေပါကြောင်း....
May I help you??:P:P
Thanks for your discuss
University ကတော့ မတက်တော့ပါဘူ...(ပျင်းလို့)
အေ၀းသင်တက်ပါလား Bro ...
အလကားရတဲ့ ဘွဲ့တစ်ခုက အသုံးမကျဘူးဆိုပေမဲ့ .... Bro နောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ အသုံး၀င်မှာပါ။
အေ၀းသင်ဆိုရင် သိပ်လဲမတက်ရသလို သိပ်လဲအားမစိုက်ရပါဘူး။ ကျနော်ဆို ပညာရေးပိုင်းမှာမညံ့ပါဘူး ... ဒါပေမဲ့ အဲဒီအေ၀းသင်ကို ခပ်ပေါ့ပေါ့လေးပဲဖြေတယ် ... မရှက်ပါဘူး ... ကျနော် ၆ နှစ်ဖြေပြီး ဘွဲ.ရလာတယ် ..... အဲဒီ ၆နှစ်အတွင်းမှာ တခြား Diploma & Certificate တွေ အများကြီးရခဲ့တယ်။ :5:
တစ်ခုပြောပြမယ်နော် ... ရိုင်းသလိုဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ... :77: ... Friends တွေကိုခင်လို့ပြောမှာပါ။
ဘွဲ့လက်မှတ်ကို Eကုန်းစက္ကူ တစ်ခုလိုသဘောထားတယ်ဆိုရင် .......
အဲဒီဘွဲ့လက်မှတ်လေးတောင်မရှိရင် ... ကျနော်တို့က Eeပါပြီး E မကုန်းတဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ Bro ...
အေ၀းသင်လောက်တော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး တက်လိုက်ပါ Bro .... \_:D/
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို Alexander ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကို နောက်ပြန်မလှည့်တော့ပါဘူး..။
အနော် IDCS ပြီးရင် စလုံးကိုသွားပါမယ်။ ဟိုမှာဆက်တက်မယ်ပေါ့နော်.....။ အဲသလိုရည်မှန်းထားတာပဲ။။ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာတော့ ကိုယ့်တာ၀န်ပါ....။ ကျနော် Marine University တက်ခွင့်ရပါတယ်.. လူတွေ့တွေဆေးစစ်တာတွေလည်းဖြေပြီးပြီ......။ဒါပေမဲ့ မတက်တော့ဘူး..နည်းနည်းတော့ နှမြောစရာကောင်းပါတယ်......။ ဒါပေမဲ့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ.။
Thank you very much for your advice,, Ko Alexander...
ရန်ကုန်လာတုန်းက တွေ့တောင်မတွေ့လိုက်ရဘူး။။ အနော်လည်း စမ်းချောင်းမှာနေတာ.......
ကျနော်လဲ ၁၀တန်းပီးတာနဲ့ချက်ချင်း A+ ပြေးတက်လိုက်တယ်.ပီးတော့ Network+ တက်တယ်. နောက်ပီး အခု Web Administrator တက်နေတယ်ဗျ အော် မေ့လို့ Net+ တက်ပီး 270 တက်သေးတယ်Computech မှာပဲ
ကျနော်တော့Computech ကြိုက်တယ်ဗျ သင်ပေးတာလဲကောင်းတယ်
ပီးတော့ ကိုအိုင်းကြီးပြောသလို KMD ဆိုတာအခု နာမည်ပဲရှိတော့တာဗျ
ကျနော်ကတော့ ၂၀၀၀ မှာ ဆယ်တန်းပြီးတော့ သူများနည်းတူ ကွန်ပျူတာတက်တယ်... မပြီးလိုက်ပါ... ၂၀၀၁ မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို စာပြပေးရင်းနဲ့ သူက ကျနော်တက်ခဲ့တဲ့ စင်တာက ပိုင်ရှင်ရဲ့ တူ ဖြစ်နေတာနဲ့ ၂၀၀၁ မှာ အဲဒီ စင်တာမှာနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...
ရောက်ရာက်ချင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း တစ်တိုင်းလုံးရဲ့ E-library project ကို စင်တာကရထားတာမို့ CD တွေကူးရ၊ စက်တွေဆင်ရ၊ ပျက်လို့ ပြန်ရောက်လာတာတွေ ပြင်ရနဲ့ ၁ လ အတွင်းမှာ A+ နဲ့ ညီတဲ့ ပညာကိုရသွားပါတယ်။
အဲနောက်တော့ ကျနော် ငယ်ငယ်လေးထဲက ဆော့နေကြ ဂိမ်းဆိုင်က ကွန်ပျူတာဂိမ်း လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ အဲကိုရောက်သွားပါတယ်.. ကွန်ပျူတာဂိမ်းအပြင် Multimedia service အကုန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Video, Audio editing အစုံပဲ... ၂၀၀၂ အကုန်နဲ့ ၂၀၀၃ ပတ်၀န်းကျင်ကပေါ့...
နောက်တော့ မိုးမိုးနဲ့ Tower Studio မှာ Recording ကို နည်းနည်းတီးခေါက်မိပြီး... Player နဲ့ Engineer ကို အရူးထခဲ့ပါတယ်... ၂၀၀၃ အကုန်လောက်မှာ သီချင်းတွေရေး၊ recording တွေပဲလုပ်နေပါတယ်၊ ၁၄ ပုဒ်လောက်ပြီးတယ်၊ ပိုက်ဆံမရှိလို့ မထုတ်နိုင်ဘူး...
၂၀၀၄ မှာ အင်တာနက်သုံးချင်လွန်းလို့ မန္တလေး NTG မှာ ဆရာကိုနိုင်ငြိမ်းအောင်နဲ့ ကပ်နေခဲ့ပါတယ်... အဲ ကွန်ပျူတာ နောက်ဆုံးနှစ်တက်နေတုန်းကပေါ့.. အဲတုန်းက ကျောင်းခေါ်ချိန် ၇၅% ပြည့်မှဆိုတော့ သောကြာနေ့ ၁၂ နာရီ ကျောင်းဆင်းရင် မန်းကို ပြေး.. တနင်္ဂနွေညနေ မုံရွာပြန်နဲ့ တော်တော် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်.. ဆရာ ကိုနိုင်ငြိမ်းအောင်ဆီမှာပဲ Windows 2000 Advanced Server, ISA server, SQL server တို့နဲ့ ရင်းနီးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၅ မှာတော့ ရန်ကုန်ရောက်ပြီပေါ့.. YES မှာ အင်္ဂလိပ်စာတက်ဖူးတယ်.. မပြီးပါ.. နှစ်ပတ်ပဲကြာတယ်.. ယောက်လမ်းက စင်တာတစ်ခုမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အဖော်မရှိလို့ C# လိုက်တက်ဖူးတယ်.. မပြီးပါ... MIT (MPEC) MCAD (web) တက်ဖူးတယ်.. မပြီးဘူး...
အဲလိုနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုု သိလာတယ်.. သင်တန်းသွားတက်ရင်တော့ သင်တန်းကြေးပဲ ဆုံးမယ်.. ငါနဲ့ မဖြစ်ဘူးဆိုုပြီး... CD တွေ စာအုပ်တွေနဲ့ ပဲ နှစ်ပါးသွားတော့တယ်.. အဲမှာမှ အဆင်ပြေတော့တယ်... အဲလိုု နဲ့ ကောင်းနေတုန်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ထပ်ရောက်လာတယ် ဂီတရူးပေါ့... အဲလိုနဲ့ သူနဲ့ ပြန်ပေါင်းမိပြီး.. သီချင်းဘက်ပြန်ရောက်သွားတယ်.. ၁၀ ပုဒ်လောက် ထပ်လုပ်ဖြစ်တယ်...
နောက်တော့ အစ်ကို၀မ်းကွဲတစ်ယောက် အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်လို့ သူ့ဆီရောက်သွားတယ်.. ၂၀၀၆ မှာ သူနဲ့ လဲ ရန်ဖြစ် ဘွဲ့ယူစရာ ကိစ္စလဲပေါ်လာလို့ မုံရွာပြန်သွားတယ်...
ဒီလိုပဲ လေ နေတယ်.. နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်လို့ သွားကူနေတယ်... အဲမှာ MZ ကိုရောက်ဖြစ်တယ်.. MZ မှာ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကူနေတုန်း.. ဇာတ်ဆရာ ကိုပီဇီက MMEnglish ဆိုလို့ အဲဘက်ရောက်သွားတယ်...
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လကျော်လောက်က ကျနော့ အိမ်က အင်တာနက်တပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး တပ်မပေးလို့ အိမ်ပေါ်ကဆင်းတယ်.. အွန်လိုုင်းလဲ မ၀င်ဖြစ်ဘူး.. ကိုပီဇီတောင် တင်းနေတယ်..
ခုလောလောဆယ်တော့ (လေ လို့လဲ ၀ ပြီဆိုတော့) ရန်ကုန်ရောက်နေတယ်.. ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ဒီက ဆရာတွေနဲ့ တိုင်ပင်ရဦးမယ်.. နက်ဖြန်တွေ့ဖို့ ချိန်းထားတယ်...
ဟီး.. ဟီး.. မရေးရတာ ကြာလို့ အရှည်ကြီးရေးပလိုက်တယ်... သီးခံပြီး ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူူး....
အတူတူဘဲနော်...ကောင်ကလေး (ကုလားလေသံလေးနဲ ့):D:D
Php ကိုမမှီတမှီနဲ့လိုက်ဖမ်းနေတုန်းဘဲ...:P:P
2001 မှာ Yangon University တက်တယ် ၁ နှစ်ကျော် တာ၀မှာ သွားတက်ကပြီး နောက်နှစ်တွေ ကျတော့ Main ထဲမှာ တက်ကပါတယ် ... ( ကံပေါ့လေ ) သူများတွေ ဒဂုံ တို့ တာ၀တို့မှာ တက်တုန်း ကိုတွေက မိန်းထဲမှာ ဟဲဟဲ
2005 မှာ ကျွန်တော်ဘွဲယူကတယ်
2005 - 2006 မှာ ကွန်ပျူတာ လောထဲကို ၀င်လာတယ်
2006 မှာ MCSA ရခဲ့ပါတယ် ( computech ) မှာ တက်ခဲ့ပါတယ်
2007 မှာ အလုပ်လုပ်တယ် ( အလုပ်ရှင်ပေးသော ပိုက်ပိုက် များသောကြောင့် ပျက်စီးမှာ ဆိုးပြီး ထွက်လာခဲ့သည် )
2008 မှာ စင်ကာပူသွားဖို့ကြီုးစားဖူးသည်.....
2009 မှာ နိုင်ငံခြားသွားဖြစ်အောင်တော့သွားမည်............
ကိုဂူးဂူးရဲ့ ဘ၀ ဇာတ်ခုံအဖုံဖုံ နဲ့ ကို Zude ရဲ့ အကြောင်း ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်လေခြင်း အနော်ကတော့ ၁၀ တန်းပြီးပြီးချင်း ရွာပြန်ပြီး ကောက်စိုက်နေတာ ၆ လလောက်ကြာတယ်.....:D
ရွာသူလေးတွေနဲ့ညားမှာစိုးလို့ ကြီးတော်က ပြန်ခေါ်တော့မှပဲ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာတာပဲဗျာ.......:D.
အခုတော့ ပျင်းခြောက်ခြောက်နဲ့ သူများတွေ University တက်နေချိန်မှာ.........
အနော်ကတော့ ၁၀ တန်းပြီးပြီးချင်း ရွာပြန်ပြီး ကောက်စိုက်နေတာ ၆ လလောက်ကြာတယ်.....:D
မယား တောသူတဲ့ .....
ဒီခေတ်တောသူတွေလဲ မည့ံပါဘူးနော့ ..... Physical ကော Mental ကော ... တချို.တွေကတော်တော်ခေတ်မှီပါတယ် ...... ၀တ်တာစားတာကအစ အလန်းလေးတွေလဲရှိပါတယ်ဗျ။
တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော် ... ကျနော် သွားဖြစ်တဲ့ရွာတွေက Nargis Cyclone ဖြစ်ပြီး UN & INGO အဖွဲ့တွေတော်တော်များများ၀င်ခဲ့တဲ့ရွာတွေဆိုတော့ ... ... ... ဒီအဖွဲ့တွေက ရန်ကုန်သူတွေကို အားကျပြီး အတုယူလိုက်၀တ်နေတာလားတော့မသိဘူး .... .... မိန်းကလေးဆိုတာ ... ဒါမျိုးတော့ အတုယူတယ်မြန်တာကိုးဗျ .... :)):D
Bro မောင်ပြုံးလဲ တောသူလန်းလန်းလေးတွေ လိုချင်ရင်တော့ ... ဒီကိုလာခဲ့ ...
အလိမ္မာ အိမ်ပါ အလန်းလေးတွေ ရှာပေးမယ် ..... :P:P
မှတ်ချက် ... Alexander လဲ ဒီလိုနဲ့ပဲ မော်ကျွန်း က မခွာနိုင် ဖြစ်နေကြောင်းပါ ....... ):))
ဘယ်လို assignment မျိုးလဲဗျ??? ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတယ် money ကောင်းကောင်းရရင်ရေးပေးမယ်:D
ကျွန်တော်ကတော့အကုန်ရေးတယ် Web လဲရေးတယ် Program လဲရေးတယ် Network& System Administration လဲလုပ်တယ် Pen Test လဲလုပ်တယ်:D
ရပါပြီ ကိုAlexander ရေ
I have foundagirl . She is form MZ....... I have proposed her....... Don't say to others.:D
သူများတွေကိုမပြောနဲ့နော်........ တော့ပစ်ချော်သွားြံပီး ကိုဇေယျာရေ ချောတီး.....
အကို.ကိုကျနော်တို.MZ မှာ မတွေ.မဖူးသိပ်ပီးကျနော်ပဲ၀င်တာမကြာသေးလို.ဖြစ်မှာပါ
ဟုတ်အခုဆွေးနွေးပေးသွားတာတွေကိုကြည့့်ရင်ကျနော်တို. MZ က ဆရာ့ဆရာကြီးတွေက
working experience တွေနဲ.ပြည့်နေသူတွေပါပဲလားဆိုတာသိလိုက်ရတယ်
ကျနော်တို.ကတော့ ဟိဟိ သင်ယူနေဆဲပါခင်ညာ:D:D
ကျွန်တော်ကတော့ ဆယ်တန်းပြီးတော့ ကွန်ပြူတာ basic ကို KMD(ဆိပ်ကမ်းသာ) မှာတက်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ LCCI LEVEL1&2 နဲ့ MYOB Level2ကိုတက်တယ်။ ဒီကြားထဲ Pratical a+ ကိုလဲ တက်လိုက်သေးတယ်။ ဒီဟာတွေက KMD (ISC)မှာပါ။ 36လမ်းရုံးချုပ်ဆိုပါတော့။ ပြီးတော့ BSE (Basic Software Enginerring)ကို မြေနီကုန်း KMD မှာတက်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ပဲ မလေ့လာတာလား ဆရာပဲမကောင်းတာလားတော့ မသိဘူး။ BSE ကို တစ်လုံးမှမရလိုက်ဘူး။ အဲ တစ်ခုတော့ ရလိုက်တယ်။ အဲဒါက နောက်နောင် KMD မှာတက်စရာရှိရင် ရုံးချုပ်မှာပဲ တက်သင့်တယ်လို့။ ကျွန်တော်ပဲ အယူသီးတာလားမသိပေမယ့် ISC မှာတက်တဲ့ သင်တန်းအားလုံးက မှတ်မိပြီး ဆရာတွေကိုလည်း Branch က ဆရာတွေထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း KMD တွင်သင်တန်းတက်မည့်သူများ ရုံးချုပ်တွင်သာတက်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးချင်တယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော် WEB ESSENTIAL ကို CREATIVE မှာတက်နေတယ်။ မောင်ပြုံးတို့ ကို James Yaung တို့ နဲ့ အတူပေါ့။ အင်ဖိုတက်ထဲမှာလေ။
၇တန်း အောင်တော့ ကွန်ပြူတာစတက်
kmd မှာ basic ဆိုပီးယောင်ဝါးဝါးနဲ့တက်လိုက်တာ သင်တာတွေက
ဘာတွေမှန်းလဲမသိဘူး.. သူများတွေ windows 3.1 လှလှလေးသုံးနေချိန် ကိုယ်က မဲမဲတူးတူး ကြီးနဲ့
ဆယ်တန်းအောင်တော့ အိမ်က ကွန်ပြူတာတစ်လုံး၀ယ်ပေးတယ် p3
AOE, Red Alert2 , final fantasy VIII နဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေတယ်
2000 - ACE မှာ level 1-2-3 ပြီး
MICT (Myanmar InfoTech)ထဲက ACE မှာ တစ်နှှစ်အလုပ်သင် ... ထွက်
အဲဒီမှာ အများကြီး ပညာရခဲ့ပါတယ်.. ဒါကိုနောက်မှသိခဲ့ရတာပါ..
(ကိုဝင့်နဲ့ ကိုပီ တို့ကို ဒီကနေ ကန်တော့လိုက်ပါတယ် :77:)
ဂီတကိုရူးသွပ်ပီး ၃နှစ်လောက် အချိန်ကုန်သွား...
အခုတော့ အခြေချမိတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာ အင်တာနက်ဆိုင်လေးဖွင့်ပီး MZ နဲ့အတူ ဘဝ ကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်တုန်းက MCC မှာ Software Engineering တက်ဖူးတယ်။ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပါပဲ။ တစ်လလောက်ပဲရှိသေးတယ် ကိုယ့် သဘောနဲ့ ကိုယ် ထွက်လာလိုက်တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့..ဆယ်တန်းဖြေပြီးပြီးချင်း a+ သင်တန်းတစ်ခုတက်ထားပါတယ်.
အခုလောလောဆယ် windows server 2008 70-640 ဖြေဖို့လုပ်နေတယ်ဗျို့
၁၀ တန်းပြီးတော့ ..
HD Computer မှာ Win 95 နဲ့ 98 စတက်တယ် ... ပြီးတော့ ကိုစိုင်းဆီမှာ ... Jazz စတက်တယ် .. မလိုက်နိုင်လို့ ..Classical ပဲဆက်တီးဖြစ်တယ်...
GTI တက််တယ် .. B-Tech သာေ၇ာက်တယ် .. ဘာမှန်းမသိပဲထွက်ခဲ့တယ် ..
၂၀၀၀ မှာ .. သခင်မြပန်းခြံ နားက .. ACE မှာ C သင်တယ် .... ပြီးတော့ မလေးရှားသွားတယ် ..
၂၀၀၃မှာ ဘွဲ့လာယူတယ် ..(မရပါ )
၂၀၀၄ မှာ BARS Program မှာ Computer Major ကိုစတက်တယ် ..
၂၀၀၅မှာ KMD ရဲ့ 12000 တန် Basic Web Design တက်တယ် .. လူကပိန်းတော့ .. Certificate တောင်မယူဘူး ( အရမ်းကောင်းလွန်းလို့):)):)):))
၂၀၀၈မှာ .. Gusto မှာ .Net Frame Work နဲ့ Industrial ASP.Net ကိုစတက်တယ် .. ** တော်တော်ကောင်းပါတယ် **
******* Istein ပြောသလိုပဲ ... A+ , Network+ တို့နဲ့ ပတ်သတ်ရင် .. " Compu tech" ကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ် ...
**** C# တို့ ASP.Net နဲ့ တခြား ဟာတွေကိုတက်ချင်ရင် .. M3Wi နဲ့ Gusto မှာတက်ပါ..(programming basic )တော့သိရမည် ..
**** Internet သုံးပြီး Chat ချင်ရင် .. 8 မိုင်က MIT ကိုသွားပါ ..:77: (မှားရင်ခွင့်လွှှတ်ပါ)
၂၀၀၂မှာ ၁၀တန်းအောင်ပြီးတော့ ၃၇လမ်းက MediaSmart မှ game programming သင်တန်းလေးသွားတက်လိုက်တယ်.. DOS game အသေးလေးတွေစရေးဖြစ်တယ်.. ပြီးတော့ Winner နဲ့ လူ့စွမ်းအားပေါင်းဖွင့် Dip. SE ကို ဗိုလ်တစ်ထောင်မှာ တက်တယ်.. programming အခြေခံတွေ တတ်လာတယ်.. မဆိုးပါဘူး.. QBasic, C++, Java, VB တွေသင်ခဲ့ရတယ် ထင်တယ်.. ပြီးတော့ MCPA က JITEC လို exam လေးအားယားနေတာနဲ့ သွားဖြေတာ အောင်သွားတယ်.. အဲဒီလက်မှတ်နဲ့ Dip.SE နဲ့ ပေါင်းပြီး bridging course ၁ခုဖြေပြီးတော့ kmd မှာ IAD တန်းတက်လို့ရသွားတယ်... ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်တက်ရင်းနဲ့ IAD ပြီးအောင် တက်လိုက်တယ်.. ပြီးတော့ BCIS ဆက်တက်တယ်.. ၃တန်းရောက်တော့ ရေကြောင်းကနေထွက်လိုက်တယ်.. အပြင်မှာအလုပ်လုပ်တယ်.. IAD တုန်းက final project လေးကို Zealous company မှာ ဆက်လုပ်ရင်း iMon ဆိုတဲ့ cybercafe software လေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်.. အားတဲ့အချိန်မှာ MCQ တွေကျက်ပြီး ASP.NET C# တစ်ဘာသာဖြေလိုက်တော့ MCP ဖြစ်သွားတယ် :P... ၂၀၀၇မှာ စလုံးရောက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ အားတဲ့အချိန်မှာ www.gameinstitute.com ကနေ C++ module2certificate ရအောင် online ကနေတက်လိုက်တယ်.. အဲဒီလက်မှတ်နဲ့ တစ်ခြားလျှောက်လုပ်ထားတာလေးတွေပြပြီး ၂၀၀၈မှာ ဂိမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ game programmer ဖြစ်လာတယ်.. လောလောဆယ်တော့ NTU က Digital Media Technology M.Sc entrace ရလို့ part time ဆက်တက်နေတယ်..
အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ သင်တန်းဆိုတာတွေကို လက်မှတ်လိုအပ်မှပဲတတ်သင့်ပါတယ်.. ဘန်းကျော်ကသင်တန်းတွေက သင်တော့သင်တယ်.. ဒါပေမယ့် စာအုပ်ထဲကဟာပဲ.. ဘယ်လိုဆက်လေ့လာရမလဲဆိုတာကို မသင်ဘူး.. အဲဒီတော့ သင်တန်းတက်ပြီး ဘာမှမသိဘူးဆိုတဲ့ ကိစ္စကို သင်တန်းကိုအပြစ်ပြောမနေပဲ ကိုယ့်ဟာကိုဆက်လေ့လာနိုင်အောင်ပဲ လုပ်ရမှာပါ.. နောက်ပြီး assignment တို့ project တို့ဆိုရင်လည်း အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့် experience အနေနဲ့ပြနိုင်အောင် ကောင်းကောင်း standard ရှိရှိလေးတစ်ခါတည်း လုပ်လာသင့်ပါတယ်.. အဲဒါဆို ကျောင်းပြီးတာနဲ့ အလုပ်ရဖို့မခက်တော့ဘူးပေါ့...
အဲဒီဘွဲ့လက်မှတ်လေးတောင်မရှိရင် ... ကျနော်တို့က Eeပါပြီး E မကုန်းတဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ Bro ... :d
အဲလက်ဇင်းဒါး ဟီး...အင်းဂလိပ်နာမည်ကိုဗမာလိုရေးလိုက်တာဘယ်လောက်ဖတ်ရတာခက်သွားပြီးတော့ထောင့်သွားတာတွေ ့တယ်နော်၊အဲတာကြာင့် computer ကိုမြန်မာလိုသုံးရရင်ဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားသာကြည်ပေတော့
IT technician ဆယ်တန်းအောင်???? OK နော်
ှုွှIT Manager ဆယ်တန်းအောင်???? မရှိပါဘူး
အနည်းလေး Diploma/ Bachelor Degreeတစ်ခုခုတောင်းပါတယ်
ပိုင်ရှင်သား ၈တန်းအောင်Manager မပါပေါ့နော်
i now working and i learn hack from mz
ကျွန်တော်ကတော့ဆယ်တန်းပြီးတော့နာမည်ကြီးကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာ A+ တက်လိုက်ပါတယ်
နောက်တော့ ကွန်ပျုတာတက်တယ်ကျောင်းရောက်တော့ ကွန်ပျုတာကြီးနဲ့သင်ရမယ်အောက်မေ့နေတာ
အထင်နဲ ့အမြင်ကတော့တက်တက်စင်အောင်ပါပဲ နောက် first year ပြီးတော့ speaking သင်တန်းတက်လိုက်ပါသေးတယ်
မယား တောသူတဲ့ ..... :d
ဒီခေတ်တောသူတွေလဲ မည့ံပါဘူးနော့ ..... Physical ကော mental ကော ... တချို.တွေကတော်တော်ခေတ်မှီပါတယ် ...... ၀တ်တာစားတာကအစ အလန်းလေးတွေလဲရှိပါတယ်ဗျ။ :d
တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော် ... ကျနော် သွားဖြစ်တဲ့ရွာတွေက nargis cyclone ဖြစ်ပြီး un & ingo အဖွဲ့တွေတော်တော်များများ၀င်ခဲ့တဲ့ရွာတွေဆိုတော့ ... ... ... ဒီအဖွဲ့တွေက ရန်ကုန်သူတွေကို အားကျပြီး အတုယူလိုက်၀တ်နေတာလားတော့မသိဘူး .... .... မိန်းကလေးဆိုတာ ... ဒါမျိုးတော့ အတုယူတယ်မြန်တာကိုးဗျ ....
အလိမ္မာ အိမ်ပါ အလန်းလေးတွေ ရှာပေးမယ် .....
မှတ်ချက် ... alexander လဲ ဒီလိုနဲ့ပဲ မော်ကျွန်း က မခွာနိုင် ဖြစ်နေကြောင်းပါ .......
ဟိဟိ ကျွန်တော် မော်ကျွန်းလာမလို့ စုံစမ်းနေတယ်.. ဘယ်လမ်းက လာရမလဲဆိုတာ..
နောက်တော့ မိုးမိုးနဲ့ tower studio မှာ recording ကို နည်းနည်းတီးခေါက်မိပြီး... Player နဲ့ engineer ကို အရူးထခဲ့ပါတယ်... ၂၀၀၃ အကုန်လောက်မှာ သီချင်းတွေရေး၊ recording တွေပဲလုပ်နေပါတယ်၊ ၁၄ ပုဒ်လောက်ပြီးတယ်၊ ပိုက်ဆံမရှိလို့ မထုတ်နိုင်ဘူး... :d
၂၀၀၅ မှာတော့ ရန်ကုန်ရောက်ပြီပေါ့.. Yes မှာ အင်္ဂလိပ်စာတက်ဖူးတယ်.. မပြီးပါ.. နှစ်ပတ်ပဲကြာတယ်.. ယောက်လမ်းက စင်တာတစ်ခုမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အဖော်မရှိလို့ c# လိုက်တက်ဖူးတယ်.. မပြီးပါ... Mit (mpec) mcad (web) တက်ဖူးတယ်.. မပြီးဘူး... :d
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လကျော်လောက်က ကျနော့ အိမ်က အင်တာနက်တပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး တပ်မပေးလို့ အိမ်ပေါ်ကဆင်းတယ်.. အွန်လိုုင်းလဲ မ၀င်ဖြစ်ဘူး.. ကိုပီဇီတောင် တင်းနေတယ်.. :d
ဟီး.. ဟီး.. မရေးရတာ ကြာလို့ အရှည်ကြီးရေးပလိုက်တယ်... သီးခံပြီး ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူူး.... :d
အမလေး ဘ၀ သံသရာ ကြီးပါလား ရှည်လျား ထွေပြား မနားတမ်းသွားကြတာ ဆိုသလိုဘဲ အခုေ၇ာဘာတွေ ရှည်ဦးမလဲ လုပ်ပါဦး။ဖတ်လို့တော့ကောင်းသား
မနက်ဖြန်အထိ ရွှေ့လို့ရသောအလုပ်ကို ဒီနေ့အပြီးမလုပ်ပါနဲ့:d